राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन पार्टीले गर्ने विषय होईन: राजन भट्टराई – Karnalisandesh
राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन पार्टीले गर्ने विषय होईन: राजन भट्टराई
प्रकाशित मितिः १६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १७:३१ February 28, 2020
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले राष्ट्रियसभामा एक जनाको नाम मनोनयनको विषय पार्टी आफैंले निर्णय गर्ने विषय नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि वामदेव कमरेडको नामको प्रस्ताव आयो। यो विषय पार्टी आँफैंले निर्णय गर्ने विषय होईन।’
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै भट्टराईले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि मनोनयनको विषय संविधानले गरेको व्याख्यानुसार पनि सरकार र राष्ट्रपतिबीचको विषय भएको सुनाए।
उनले भने, ‘सरकार र राष्ट्रपतिको विषय भएपनि पार्टीको सरकार भएको हुनाले पार्टीकै सुझाव दिने तहमा जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यो प्रस्ताव र अब अर्थमन्त्रीज्यू के हुनुहुन्छ ? अर्थमन्त्रीको पनि कार्यकाल २० गते नै सकिँदैछ। अब यी दुई जनाको नाममा नै लडाई हुन्छ कि भनेर सारा मान्छेलाई लागेको छ। यो व्यवस्थापन गर्न नसकिने विषय नै छैन्। यसको एकदमै उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुन्छ। त्यसको रिजल्ट के हुन्छ ? मैले अहिले बोल्न हतारो हुन्छ। एक÷दुई दिन कुर्न म साथीहरुलाई अनुरोध गर्छु। त्यसपछि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ।’
उनले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि संविधान संशोधन गर्ने विषय फिर्ता भएकोले अब यसबारेमा चर्चा गर्न जरुरी नभएको स्पष्ट पारे। उनले भने,‘जसले यो विषयको सुरुवात गर्यो सचिवालयले फिर्ता गरिसक्यो।’
पछिल्लो समय आफ्नो पार्टीभित्र केही विषयहरुलाई लिएर नेतृत्वको बीचमा मनमुटाव भएको हो कि भन्ने चर्चा तथा परिचर्चा भएको सुनाउँदै त्यस्तो केही नभएको जिकिर गरे।
उनले भने,‘यो कता कता अन्तत्वगत्वा यो दुर्घटनामा पो पुग्ने हो कि भन्ने खालका मान्छेहरुले आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। तपाईहरुलाई म के अनुरोध र आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने नेकपा यस्ता थुप्रै खाले अप्ठ्याराहरुलाई झेल्दै यहाँ आईपुगेको हो। र, यो अहिलेका केही विषयहरुलाई लिएर प्रायः सानातिना मतभेदहरु, यी म्यानेजेवल छन्। यी आपसमा बसेर टुँग्याउन सकिने तहमा छन्। यीनले कुनै त्यस्तो स्थितिमा पुर्याउने छैनन्। नेताहरु स्वयमले, प्रधानमन्त्रीले र अर्का अध्यक्षले, बरिष्ठ नेताले र अन्य नेताहरुले जे भन्नुभएको छ, त्यो तपाईहरुले सुनिरहनुभएको छ। त्यस किसिमको आशंका पाल्नुपर्ने स्थितिमा छैन्।’